Vaovao - Fampidirana ho an'ny Eps Foam Board
Fampidirana ny Eps Foam Board
Ny vakana polystyrene azo ovaina miaraka amina mpandrendrika rano miovaova dia zavatra fotsy nohafanaina sy novolavolaina tamin'ny lasitra aorian'ny fanafanana mialoha. Izy ireo dia manana toetra mampiavaka ny sela mihidy tsara. Ny b1 grade eps foam board dia zavatra fotsy vita amin'ny vakana polystyrene azo ovaina misy aotom-bovoka miovaova, izay efa nafanaina ary nafanaina tamin'ny lasitra. Izy io dia manana ny toetra mampiavaka ny sela mihidy tsara.
Fampiatoana ny fikojakojana ny drafi-panorenana lehibe, manitatra ny androm-piainan'ny trano. Satria ny insulation ivelany dia mametraka ny sosona insulation eo ivelan'ny drafitra, dia mampihena ny adin-tsaina ateraky ny fiovan'ny drafitra noho ny fiovan'ny mari-pana, ary mampihena ny fahasimban'ny drafitra amin'ny alàlan'ny akora manimba eny amin'ny rivotra sy taratra ultraviolet. Izy io dia mahatonga ny fahamendrehan'ny hafanan'ny efitrano, ary voafantina ny insulation ivelany amin'ny rindrina ivelany. Satria lehibe kokoa ny haben'ny fitehirizana ny hafanan'ny rindrina, dia eo afovoan'ny rindrina ny sosona fandaminana, izay mampiorina ny hafanan'ny hafanan'ny efitrano. Ny fitaovana polystyrene dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fananganana sy ny fonosana noho ny lanjany maivana, ny fanoherana ny fikorontanana, ny fanoherana, ny hafanana, ny fangejana ny feo, ny fikajiana ny hafanana, ny famonoana tena, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fahanterana, ny vidiny mora ary ny fanamboarana mora. Rehefa mafana ny vakana EPS manitatra ka hatramin'ny 90 ° C, dia mihalefaka ny vakana, ary ny fihenan'ny maso mitsoka dia afaka mampihena ny vakana EPS amin'ny 40-80 fotoana.
1. Ny vokatra dia mampiasa loharanon-karena azo havaozina, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana.
2. Ny vokatra b1 grade eps foam board dia ampiana amin'ny fibre nanometer efa nohafarana. Misy kofehy mifangaro an-jatony tapitrisa isaky ny metatra toratelo misy ny fitaovana, izay manatsara ny fahombiazan'ny insulateur an'ny vokatra, ny fanoherana ny crack, ny tanjaka azo tsapain-tanana, ny fanamafisana, ny fanoherana ny havizanana, ny fanoherana ny horohoron-tany, ny fanoherana ny hatsiaka sy ny hafanana ary ny faharetana.
3. Tsy misy famonoana, tsy misy hollowing, tsy misy tonon-taolana, toerana fanombohana haingana, mifamatotra mivantana amin'ny sosona ifotony mba hamoronana rafitra fantsona mafana mifangaro miaraka amina rafitra matanjaka. Manatsara be ny fampisehoana insulate thermal.
4. Fampisehoana insulasi hafanana tena tsara, ny sanda fitsapana fitondra-tena mafana dia eo anelanelan'ny 0.046-O.048W / (mk), ny fitaovana famolavolana hafanana vaovao an'ny silikonika SQ dia miorina amin'ny fiheverana fa manatsara hatrany ny lalàna mifehy ny angovo nasionaly ho an'ny tranobe ( fitehirizana angovo ankapobeny 65) Ho an'ny fampandrosoana sy ny fanjifana, ny hatevin'ny sosona insulate thermal namboarina amin'ny ankamaroan'ny faritra ao amin'ny fireneko dia mila eo anelanelan'ny 30mm sy 100mm fotsiny, izay afaka mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny rindrin'ny trano.
5. Miaraka amin'ny fahaizan'ny mamatotra mafy, tsy misy triatra, coefficient deformation ambany an'ny tetezana mangatsiaka sy mafana, amin'ny firafitry ny rafitra insulation, dia tsy ilaina ny mampiditra mpampita interface sy mampiasa harato fibre vera mahatohitra eo amin'ny rindrina ifotony. Ny hatevin'ny fananganana insulate dia ao anatin'ny 120mm, ary ny tabilao b1 grade eps foam dia azo atsangana ary hatsangana amin'ny andro iray ihany. Mihena ny fomba fanamboarana, mihazakazaka ny hafainganam-pandehan'ny fanamboarana, ary voatahiry ny asa sy ny fotoana, amin'izay mampihena ny vidiny ary mahazo tombony ara-toekarena tsara.
6. Fampanjanjana marimarina: ny fonosana dia mampiasa simenitra silika-alimina sy agregat granular polyphenyl ho fonosana misaraka. Ny tahan'ny kitapo 1: 1 dia manome antoka ny fizarana marina ny vokatra. Ny polyphenyl granular agregate dia zahana manokana mba hanafoanana ny fifangaroana. Ny fatiantoka famafazana mora amin'ny fizotrany.
Eps sombin-javatra Cornice endrika famolavolana milina, Eps fanaovana koronosy Cornice, Eps Cornice Famolavolana tsipika famokarana, Eps Cornice koronosy tsipika, Masinina famolavolana endrika Eps Cornice, Masinina Cornice Cornice Eps,